Ny fivoaran'ny logo | Martech Zone
Alahady 21 aprily 2013 Alahady 21 aprily 2013 Douglas Karr
Ireo olona ao amin'ny Ny Orinasa Logo manontany Tokony ho lany andro ny Logo? Tsia. Ny logo dia tsy sary tsy hay hadinoina na sary an-tsaina ny marika asehon'izy ireo, miankina amin'ny medium efa fahita sy ny teknolojia hijerena azy ireo koa izy ireo. Misy sary famantarana ny fiara mandeha amin'ny pirinty, amin'ny Internet, ary amin'ny fiara… dia toy izany koa tsy maintsy noforonina Samy misolo tena ny marika ary azo zahana amin'ny fomba mifameno amin'ny mpanelanelana rehetra… sy ny fanaovan'ny fiaran'ny moto anao.
Taona maro lasa izay, ny famolavolana logo dia nampifangaro ny endrik'ilay logo amin'ny loko mainty sy fotsy na amin'ny milina fax… tsy mpanelanelana izay mahaliana antsika ankehitriny izany. Fomban'ny logo matotra koa rehefa mandeha ny fotoana, ary mety ilaina ny mijanona ho toy ny marika vaovao fotsiny. Amin'ny ho avy dia matoky aho fa ny logo telo dimensional, layered na fihetsiketsehana dia hisongadina kokoa rehefa manohana azy ireo ny fitaovantsika. Misy taonina ny loharanom-pahalalana any mba haharaka ny fandrosoan'ny logo.
Vao tsy ela akory izay no nanavao ny sary famantarana anay tao amin'ny Highbridge, avy amin'ny:
Io kinova io dia fitambaran'ny D sy K amina sary izay noheverina ho manondro ny maso mijery ny ho avy. Tsy nisy olona nahazo an'izany anefa, ary ny vazivazy an'ny elatra Batman dia nanjary. Ny mpamorona sary, Nathan, dia nandray an-tanana sy namolavola sary famantarana izay mampiseho tsara anay. Izahay dia mandeha amin'ny làlan-kizorana samihafa handefasana valiny ho an'ny mpanjifantsika miakatra. Ilay fango vaovao:
Ireto misy fivoaran'ny logo malaza avy Ny Orinasa Logo:
Tags: sary famantarana paomabmw logosary famantarana canonlogo an'i ibmsary famantarana kodakLogosary famantarana mercedessary famantarana mercedes-benzMicrosoft Logosary famantarana microsoft windowspepsi-logosary famantarana akorandriakasary volkswagensary vwsary famantarana windowslogo xerox
Manimba ny asanao ny valinteninao amin'ny valin'ny haino aman-jery sosialy
Hevitra 5 momba ny fiarahamonina no afaka maneho ny asanao
Apr 22, 2013 amin'ny 10: 09 AM
Tiako ny elatra Batman! Fa tiako koa ny Star Wars X-Wing Fighters. Tena ratsy ve ny fiarahana toy izany? Angamba, mety tsy. Heveriko fa ny gradients dia afaka manampy harena amin'ny logo, fa ny vaovaonao dia MIANDITRA amin'ny gradient mba hampitana endrika. Izany dia hahatonga anao ho sahirana amin'ny habe kely kokoa, ary raha toa ka mila dikan-teny mainty sy fotsy ianao.
Ary raha miombon-kevitra amin'ny fanahin'ity lahatsoratra ity momba ny fivoaran'ny marika marika aho, dia heveriko fa mampihomehy ny nampidiranao an'i Pepsi. Ny sasany dia mety hiady hevitra fa ny fivoaran'io marika io dia natosiky ny tahotra - ny fahazoana zotram-piainana. Heveriko fa ny fiovan'izy ireo imbetsaka dia miteraka fahatsapana tsy fandriampahalemana sy fisalasalana. Raha ny Coca-Cola mpifaninana voalohany amin'izy ireo dia niantehitra tamin'ny marika nandritra ny taona maro. Ny fiovana amin'ny marika fototra dia tsy dia misy dikany loatra, ary ny kolontsain'ny pop dia nandray izany ho toy ny ampahany amin'ny Americana.
Ny tiako holazaina dia, na dia tsy voatery ho lany andro aza ny logo iray, dia tokony hiezaka ho amin'izany ianao. Azonao atao foana ny manova ny hafatra manodidina azy, fa ny olona dia mahazo fampiononana sy fahatokisana amin'ny marika matoky tena, ary maneso an'ireo izay tsy. Ahoana no iadianao amin'ny fitsikerana ny mpanjifa? Aoka ho marina.
Apr 23, 2013 amin'ny 4: 57 AM
Tsy evolisiona mihitsy ny logo an'ny YMCA – na dia mety mila izany aza izy ireo. Fango tsotra fotsiny izy ireo amin'ny YMCA na rafitra samihafa ary raha ny fahafantarako azy dia mbola ampiasaina daholo izy ireo.